Isitishi saseWaverley eBakers Creek - I-Airbnb
Isitishi saseWaverley eBakers Creek
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKristi
ISikhululo saseWaverley-indlu yasefama yokuqala enezitena ezimbini esecaleni kwe-Bakers Creek enomgangatho omangalisayo weenyawo ezili-14 kunye neendawo zomlilo ezivulekileyo.
I-13km ukusuka eBundarra ungayonwabela indawo ezolileyo nenoxolo ngaphakathi nakwindawo ejikeleze ikhaya.
Indlu yeyakho yonke ngexesha lokuhlala kwakho kubandakanya amagumbi okulala ookumkani aba-2 kunye negumbi labantwana elineebhanti. Yonke inikwe ilinen yodidi, igumbi lokuhlambela lendalo kunye neemveliso zokucoca, imveliso entsha, kunye nendawo eninzi evulekileyo!
Ekuphela kweziphazamiso onokuzifumana ngexesha lokuhlala kwakho kukuntyiloza kweentaka zomthonyama, iinkomo eziphaphayo zisitya kamnandi, iikhangaru zisitya ingca kwaye ngamanye amaxesha isithuthuthu esingaqhelekanga sijonga imfuyo.
Yiza nencwadi kwaye ukhuphe iplagi ngexesha lokuhlala kwakho, okanye uze usete indawo yeofisi kwiveranda ukuze utshintshe ngokupheleleyo indawo kunye nendawo yokusebenza. Ndiqinisekile ukuba uyakushiya uhlaziyekile nangayiphi na indlela!
42" TV ene-I-Chromecast
Iintsuku eziyi-7 e Bakers Creek
Isikhululo saseWaverley sikumgama oyi-13km ukusuka kwilokishi yaseBundarra.
IBundarra General Store inezixhobo ezisisiseko ezivulwa ngoMvulo-Fri 9-5pm & Sat-Sun 9-12pm, iBundarra Commercial Hotel yenza isidlo sasemini kunye nedinala Thu-Sun, kwaye iBundarra Sport & Recreation Club ivula ngolwesihlanu ngolwesihlanu kwisidlo selizwe kunye nangeCawe nge 5pm. ipizza.
Kungenjalo ezinye iindawo zokuthenga ezinkulu zise-Inverell (60km) okanye eArmidale (90km).
Ngembali yendawo yaseBundarra kunye nolwazi nceda ujonge - bundarra.info
Umbuki zindwendwe ngu- Kristi
Sixelele nje ukuba ukhetha ukungena ngaphandle kokuqhagamshelana okanye ukudibana kunye nokubulisa kwikhaya. Okanye inokubonelelwa.
Asihlali esizeni kodwa siya kudlula sisenza imisebenzi yefama ngokubanzi kwaye sihamba nje kancinci ukuba ufuna ikomityi yeswekile okanye ukuba kukho into elahlekileyo!
Asihlali esizeni kodwa siya kudlula sisenza…
Inombolo yomthetho: PID-STRA-6908-1